China BEUFILLER hyaluronic acid Lip yokugcwalisa mveliso kunye nabenzi | IiBululines
I-BEUFILLER hyaluronic acid Lip yokugcwalisa
UBEFILERI Umnqamlezo onxibelelene ne-hyaluronic acid dermal filler yinto eyodwa ezinzileyo ye-hyaluronic acid engeyiyo imvelaphi yezilwanyana, ithandwa kakhulu isetyenziselwa ukuphucula imilebe, kuba ibiza kakhulu kwaye inokunika iziphumo ngokukhawuleza kunye nexesha lokufumana kwakhona.
1, uphawu: BEUFILLER
2, Ukwakhiwa: 24mg / ml i-hyaluronic acid ezinzileyo
3, Imvelaphi yezixhobo: Ithunyelwe ukusuka korea
4, Isirinji Brand: BD Inkampani
5, Ummeli onxulumene noMnqamlezo: BDDE
6, Ubungakanani beenaliti / isiqwenga: 2 iinaliti zeBD
7, Ubomi beshelf: iminyaka emi-3
Iimpawu ze UBEFILERI IHyaluronic Acid ukugcwalisa imilebe
1. Izinto zendalo: zivela kwizicubu zebhayoloji, ke akukho luvo lwangaphandle komzimba kunye nomcimbi wangaphandle oseleyo.
2. Iimveliso zobuchwephesha obuphezulu: ngeendlela zobuchwephesha obuphezulu kunye nobuchwephesha bemveliso yobuchwephesha, umgangatho wemveliso uqinisekisiwe, akukho ukwaliwa kunye nokungahambelani nezinto ezithile.
3. Ilula, ikhuselekile, iyakhawuleza kwaye iyasebenza: Utyando lweplastikhi encinci aludingi kutyando, kufuneka inaliti ye-intradermal kuphela, ethintela umngcipheko woqhaqho. Kwangelo xesha, i-micro facelift isebenzisa inaliti yendawo, ngenxa yoko isiphumo sinokubonwa kwangoko.
4. Kuyathuthuzela kwaye akukho zintlungu: utyando oluncinci lwezithambiso lusebenzisa indlela yenaliti, kanye njengenaliti, kukho ukudumba okuncinci kunye nentlungu encinci kwindawo yengingqi, akukho zintlungu zinkulu, kulula ukuba abathengi bazamkele.
5. Uqoqosho kunye nokusebenza: Iindleko zotyando lweplastikhi encinci ziphakathi kobuhle bobomi kunye notyando lweplastiki, kwaye ixabiso lincinci.
6. Uluhlu olubanzi lokuziqhelanisa: Kuba yinto yezinto eziphilayo kwaye inokudityaniswa, inokusetyenziswa nakweyiphi na indawo.
Iworkshop yeklasi ye-10,000 yeklasi ye-III yezixhobo zonyango, sinobuchwephesha bokugcina inzalo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho ongqongqo, Ijeli ye-hyaluronate yesodium iyabulala inzalo ngoxinzelelo oluphezulu, kwaye inaliti iyacocwa yimitha ye-gamma. ayina-pyrogen, eqinisekisa ukhuseleko kunye nomgangatho ophezulu weemveliso ngaphandle kongcoliseko.
3.Ce, MDSAP, isiqinisekiso se-ISO
I-Gel Sodium Hyaluronate Gel yethu yafumana isatifikethi se-EU CE ngo-2008, iyona mveliso yokuqala eChina efumene isatifikethi ezimbini ze-CE kunye ne-GMP yamazwe ngamazwe.Ngowama-2016, safumana isatifikethi se-MDSAP, kwaye iimveliso zathengiswa kumazwe angama-40 nakwimimandla. kumhlaba jikelele.
Chwetheza Isidanga Ubunzulu beDerm Derm Plus
Umthamo wesirinji 1ml / 2ml 1ml / 2ml 10ml / 20ml
Izinto eziphathekayo I-HA enqamlezileyo I-HA enqamlezileyo I-HA enqamlezileyo
Uxinzelelo lwe-HA 24mg / ml 24mg / ml 20mg / ml
Ubungakanani Particle I-0.15mm-0.28mm 0.28mm-0.5mm 0.5mm-1.25mm
Inani eliqikelelweyo lamasuntswana ejeli ml 100000 10000 5000
Isetyenzisiwe 27G 30G Ayinikwanga
Apho unokufaka khona Icandelo eliphakathi kwedermis Umaleko onzulu wedermis kunye / kunye nomaleko womphezulu we-subcutis Inxalenye ephezulu yedermis
Iimpawu ezicetyiswayo Imibimbi ephakathi Imibimbi ebusweni kunye nezibaya Iintsontelo ezinkulu kunye nezibaya
Unyango Imigca yeGlabellar, umkhombe wokukrazula, iifolokhwe zeNasolabial, i-Nasolabial groove, i-Oral commissures I-Rhinoplasty, impumlo, ukuphucula imilebe, ukunyusa i-Chin, i-Cheeks padding, i-Cheek augmentation Ukwandiswa kwebele,
Umbuzo: Ngaba unayo i-filler engapheliyo?
A: Icandelo eliphambili lokuzaliswa ngokusisigxina yisamente yethambo. Emva kwenaliti, isamente yamathambo ikhula ngokuthe ngcembe kunye nezicwili zolusu, ayinakukhutshwa, kwaye ayinakufunxwa, umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga kunye ne-sequelae iphezulu. IHyalurnic acid filler lolona nyango luthandwayo nolukhuselekileyo ngoku, ngesiqhelo Iinyanga ezi-6-18 lelona xesha lihlala ixesha elide phantsi kwesiseko sokuqinisekisa ukhuseleko oluphezulu.
Q: I-Anesthetic iqulethwe?
A: Ukudibana neemfuno ezahlukeneyo kubathengi, siphuhlise iimodeli ezintathu ezintsha ezine-lidocaine ezi-3%, ukuba uyazifuna, nceda unxibelelane nentengiso yethu!
Q: Ihlala ixesha elingakanani isiphumo?
A: Iziphumo zonyango ziya kwahluka kumntu ngamnye. Kwisifundo seklinikhi, iziphumo zonyango ziye zahlala kwiinyanga ezili-12-18 emva kweseshoni yokuqala yonyango kwizigulana ezininzi. Unyango lwe-touch-up lunokugcina isiphumo esifunekayo.
Q: Ngaba kukhuselekile ukujova?
A: Ewe! Zimbalwa kakhulu iingozi ezinxulunyaniswe nonyango kunye ne-BEULINES uphawu lwe-hyaluronic acid dermal filler, Nje ukuba kukhutshwe imixokelelwane balandela indlela efanayo ne-HA yendalo. Inani le-HA elihlazekileyo kwaye lisuswe yonke imihla ukusuka kufakelo alunakuthelekiswa nanto Ihlala ihlaziswa emzimbeni.Iphulwe ngumzimba. Akukho nanye ehlala eluswini kwaye ulusu alonakalisi monakalo.
Ukuba awusombululi umbuzo wakho, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nentengiso yethu!
Egqithileyo I-BEULINES Umnqamlezo oqhagamshelekileyo iiGels zokuGcwalisa ngeDermal
Okulandelayo: I-BEUFILLER Umnqamlezo onxulumene neHyaluronic Acid Dermal Filler Gels
Hyaluronic Acid Lip yokugcwalisa
Iifayile zeHyaluronic Acid Lip Fillers
I-Hyaluronic Acid Imilebe yokuGcwalisa
Iifayile zeHyaluronic Acid Lips
I-BEULINES Umnqamlezo oqhagamshelekileyo iiGels zokuGcwalisa ngeDermal
I-BEUFILLER Inqamleza i-Hyaluronic Acid Dermal F ...